कहाँका हुन् काठमाडौं र भक्तपुरका नयाँ संक्रमित ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कहाँका हुन् काठमाडौं र भक्तपुरका नयाँ संक्रमित ?
कहाँका हुन् काठमाडौं र भक्तपुरका नयाँ संक्रमित ?
बैशाख ३१ गते, २०७७ - ०९:०७
काठमाडौं । काठमाडौंका फेरि एकजना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार राति पुष्टि भएका संक्रमित २६ जनामध्ये एक जना काठमाडौं उपत्यकाकी महिला हुन् । उनी चन्द्रगिरी नगरपालिकाकी ३३ वर्षिय महिला रहेको खुलेको छ ।
त्यस्तै, मंगलबार राति नै भक्तपुरमा दुईजना संक्रमित फेला परेका छन् । भक्तपुरका संक्रमित एक २५ वर्षिया महिला र २७ वर्षिय पुरुष रहेका छन् । मंगलबार भक्तपुरमा देखिएका दुईजना कोरोना संक्रमितमध्ये २५ वर्षीय महिला तीन दिनअघि सुनसरीको झुम्काबाट आएकी खुलेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा.समीर अधिकारीले बताए । उनी नर्स हुन भने ठिमीस्थित अर्की एक नर्स साथिको कोठामा बसेको खुलेको छ ।
भक्तपुरकै अर्का संक्रमित २७ वर्षीय पुरुष दुवाकोटको रहेको खुलेको छ । उनी सशस्त्र प्रहरीका जवान हुन भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री भिम रावलको सुरक्षामा खटिएका थिए । तर उनी १ महिनादेखि विदामा बसेका थिए । तर उनमा कसरी संक्रमण सर्यो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं र भक्तपुरका तीनैजना संक्रमितको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा उपचार भइरहेको छ । तीनै जनाको स्वास्थ्य अवस्था समान्य रहेको छ ।
यसअघि काठमाडौंका संक्रमित पाँचै जना निको भइसकेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंलाई कोरोना बिरामीमुक्त घोषणा गरेका थिए ।
भक्तपुरमा भने पहिलो पटक मंगलबार राति कोरोना संक्रमित फेला परेका हुन् ।
बैशाख ३१ गते, २०७७ - ०९:०७ मा प्रकाशित
११ हजार ७८० खोप कर्णाली प्रदेश आइपुग्यो, भोलीबाट लगाउन शुरु